Best-iibinta aan xuduud lahayn Steel CO2 Gas - Shiinaha Qingdao Industry Gastec
Best-iibinta aan xuduud lahayn Steel CO2 Gas
Gaas ku safrayaan,
Carbon dioxide loo isticmaali karaa sida alxanka a gaaska ilaaliya, khamri, warshadaha alkali, warshadaha sonkorta, warshadaha xumbo caag ah ka dhigi.
baraf qallalan waxaa loo isticmaali karaa roobka macmal ah, saamaynta qiiq stage, warshadaha cuntada, saamaynta gaar ah cunto, baraf qalalan waxaa loo isticmaali karaa baabuurta, maraakiibta, duulista, boos iyo warshadaha korontada.
khayroon daahirnimo gaaska CO2 aan bixino:
xagiisayna Common khayroon daahirnimo fasalka Cuntada khayroon daahirnimo sare
Waxaan ku hormartay qalabka maaraysay dhululubo, hal mar kululaynta inay ka soo saarto qoyaan, vacuum iyo kale work.So khayroon daahirnimo ee gaaska CO2 waa 99.999% in dhululubo ah.
Waxaan leenahay miisaanka dareere si toos ah plant.The buux gaaska buuxinta waa sufficient.We ayaa buuxinta warbixinta for cylinder.This kasta oo ay soo sheegaan in la isku diri doonaa macaamiisha warbixin imtixaanka gaaska.
Maya dhexroor ka baxsan Awood awoodda Gas design Dhererka miisaanka WP TP waxyaabaha
Our dhululubada Gaadiidka
Previous: Bixi 99.999% Gaas Gaas oo ah Warshad
Next: warshadda ugu-iibinta birta bilaa xarkaha CO2 Gas